MARC TATANDRAZA : Tranon-dainga, mpaka an-keriny…Mitohy ny fikarohana azy!
Mo Abudu, vehivavy nanangana televiziona azo jerena manerana an’i Afrika
Vehivavy mainty hoditra isan’ny mamiratra manerana ny kaontinanta Afrikanina i Mo Abudu. Vehivavy voalohany nanangana sy mitantana televiziona matanjaka hita manerana an’i Afrika ny tenany.
Marobe ireo olona tohina, noho ny zavatra rehetra nataon’ilay mpitondra fivavahana antsoina hoe : Tatandraza, izay milaza ny tenany ho apôstôly.
Ny zava-niseho farany teo izao dia nilaza ireo mpanaraka azy sy mpiray tsikombakomba aminy fa maty izy, nalevina tamin’ny 25 desambra ary vao tamin’ny faran’ny herinandro teo indray no nolazaina fa nitsangana tamin’ny maty. Ny tena nampimenomenona ny olona dia toa tsy mba nosamborina mihitsy izy, nefa manao fandrebirebena saim-bahoaka tsotra izao, mizara lainga sy fitaka. Vokatr’ireo fanontaniana maro miantefa amin’ny mpitandro ny filaminana ary, dia namoaka fanambarana tao anaty Facebook ny zandarimariam-pirenena, fa efa nisy tokoa, hatramin’ny taona 2017 lasa iny, ny fitadiavana an’ity Marc Tatandraza ity, noho ny fandikan-dalàna maro nataony tamin’ny faritra maromaro teto amintsika. Nitsoaka sy niafina foana anefa izy, ka mbola tsy hitan’ny zandary ny misy azy hatramin’izao ary angatahan’izy ireo fanampiana amin’ny olona mety mahalala izay iafenany. Efa nisy fisamborana olona roa mpiray tsikombakomba taminy, tamin'ny fakana an-keriny zaza tsy ampy taona miisa 12 avy tany Mananara avaratra sy Soanierana Ivongo, ary nentiny nankany Bekily, tamin’ny taon-dasa. Efa migadra ao amin’ny fonjan’Ambovombe androy izy ireo. Rehefa nokarohina kosa ny marina, momba ilay voalaza fa fahafatesany sy fandevenana azy tany Bekily, dia fantatra fa tsy nisy fanambarana fahafatesana, na fangatahan-dalana hanao fandevenana natao mihitsy ary tsy tany Bekily izany mihitsy akory aza izy.